इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ल्यायो पैसा पठाउने एप, भारतबाट नेपालमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउन सकिने - नेपालबहस
इन्भेष्टमेण्ट बैंकले ल्यायो पैसा पठाउने एप, भारतबाट नेपालमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउन सकिने
| १०:५९:३७ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले पैसा पठाउ नामक एप ल्याएको छ । जस अन्तर्गत भारतबाट नेपालमा सजिलै पैसा पठाउन सकिने बैंकको भनाइ छ ।
यस एपमार्फत् भारतमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो मोबाइलबाट सजिलै २४ घण्टा मै यो सेवामार्फत् नेपाल पैसा पठाउन सक्नेछन् । पैसा पठाउ एप सुरक्षित, तीव्र र सहज भएको बैंकको भनाइ छ । यो एपबाट भारतमा विदाको दिनमा पनि प्रयोग गरी पैसा नेपाल पठाउन सकिनेछ ।
पैसा पठाउ एप डिजिटल मोबाइल पेमेन्ट प्लेटफर्म हो । जसलाई भारतको केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएको छ । यो भीम, यूपीआइ, गुगल पे, मोबाइल पे, पेटीएम, ह्वाट्स एप पे, भारत पे एन्ड एनइएफटीरआइएमपीएस जस्ता सेवा प्रदायक जस्तै मान्यता पाएको छ ।
भारतमा रहेका नेपालीहरुले ५० हजार भारुका दरले वर्षमा बढीमा १२ पटकसम्म पैसा नेपाल पठाउन पाउनेछन् ।
वाणिज्य बैंकहरुले सार्वजनिक गरे नयाँ ब्याजदरः कुनमा कति ? ४ दिन पहिले
त्रिदेशीय क्रिकेट सिरिज,मैदानमा दर्शकलाई प्रवेश निषेध १४ घण्टा पहिले
सिटिजन्स बैंकको मुनाफा ४१ प्रतिशत बढ्यो, नेटवर्थ कति ? १७ घण्टा पहिले
यो साता कुन कम्पनीको शेयरमूल्य उच्चदरले बढ्यो ? ४ दिन पहिले
आज पनि हावाहुरीसहित क्षणिक वर्षा हुने ३ दिन पहिले
कांग्रेस सभापति देउवा र जसपाका नेताहरुबीच भेटर्वाता ७ दिन पहिले
अहिलेको युग विकास र समृद्धिको युग हो : मुख्यमन्त्री राई २ हप्ता पहिले
आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउन बाख्रा वितरण ४ हप्ता पहिले
मष्टा पूर्ण खोप सुनिश्चितता गाउँपालिका घोषणा २ दिन पहिले
सुकेधारामा सवारी दुर्घटना हुँदा प्रहरी असईको मृत्यु ९ महिना पहिले
अफगानिस्तानमा बम विस्फोटमा एक जिल्ला प्रमुखसहित पाँचको मृत्यु १० महिना पहिले
सामाजिक सद्भाव र सुरक्षामा खलल पु¥याउनेलाई कारवाही गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री २ वर्ष पहिले
राष्ट्रिय गौरवका योजनाका नाममा नदीजन्य पदार्थ दोहन, स्थानीय सरकार र प्रहरी माैन १० महिना पहिले